Hal ku dheg: "Bersekutu Bertambah Mutu"
Heesta qaranka: Negaraku
Magaalo madax Kuala Lumpur
Official script Latin
Qaybaha qoomiyedaha (2017)
- Prime Minister Mahathir Mohamad
- Chief Justice Md Raus Sharif
- President of the Dewan Negara SA. Vigneswaran
- Speaker of the Dewan Rakyat Vacant
- Aqalka sare Dewan Negara (Senate)
- Aqalka hoose Dewan Rakyat (House of Representatives)
- Sarawak Self-government 22 July 1963
- North Borneo Self-government 31 August 1963
- Sarawak, Singapore 16 September 1963
- Expulsion of Singapore 9 August 1965
- ASEAN Declaration 8 August 1967
- Guud ahaan 330,803 km2 (66th)
- 2017 qiyaasta 32,049,700 (44th)
- 2010 Tirakoob 28,334,135
- Mugga Dadka 92/km2 (116th)
- Guud ahaan $988.99 billion (26th)
- Qof qof $30,430 (41st)
- Guud ahaan $340.000 billion (38th)
- Calaa qof $10,430 (62nd)
Qaybsiga (2009) 46.3 (medium)
Kobaca (2015) 0.789 (high / 59th)
Malaysiya waa wadan ku yaalo koonfurta bari ee qaarada Aasiya.wadankaan wuxuu xuduud la leeyahay wadamada Filibiin, Tayland,Barunay,Singabuur iyo Indunisiya. Caasimada wadanka waa Kuala Lumbur.Wadanka malaysiya waxaa degan dad gaaraayo ilaa 28,250,000 oo qof,waxa uuna u dhisanyahay dhinaca federaalka.Malaysiya waxaa degan ajaanib kala duwan, waxaa u badan malaysiyaanka ama malaya oo 50% ah inta kale waa ajaanib iskuugu jirto hindi, shiinees iyo kuwo kale.Wadanka malaysiya markiisa hore wuxuu lahaan jiray magacyo badan, mar waxaa la dhihi jiray (wadanka jasiirada Malaysiya) hadaneh waxaa loo bedelay (malaya) 1946dii marka oo wadanka midoobay waxaa loo bixiyay (midowga malayaasha), kadib neh waxaa loo bedelay (federaalka malaya), 1957ii marka ee xornimada qaateen waxee la midoobay gobolo ka mid ah wadanka Singabuur, isla markaas neh waxaa loo bixiyay (malaysiya), Singabuur waxee malaysiya ka go'day waqti labo sano kayar. Isla markaas neh Wadanka Malaysiya wuxuu ku dadaalay dhaqaalihiisa.wadanka malaysiya waxee 50ka sano ugu horeeysay ka mid noqotay wadamada ugu dhaqaalaha fiican.
Malaysiya waxee leedahay taariikh aad u dheer, waxee jiri jirtay 40,000 oo sano ka hor, waxaa wadanka soo gumeestay gumeestihii Ingriiska laga soo bilaabo sanadkii 1786 ilaa 1963, ingiriisku wuxuu maamuli jiray ama gumaysan jiray shacabka loo yaqaano malaya, ka hor intii lagu dhaqmin federaaliga.
Dalka maleeshiya, waxaa u badan dadka Muslimiinta ah ee loo yaqaan malayga waxaa la daga hindi iyo shiinayas
Malaysia waa boqortooyo madax-bannaan oo dastuuri ah oo federaal ah, iyo xiriirka kaliya ee Southeast Asia. Nidaamka xukuumadda ayaa si aad ah loogu qaabeeyaa habka Westminster nidaamka baarlamaanku, oo ah dhaxal galka xukunka Britishka. Madaxa gobolka waa Yang Di-Pertuan agong, oo loo yaqaan 'King'. Boqorka ayaa loo doortaa muddo shan sano ah, waxaana ka mid ah sagaal maamule oo reer galbeed ah oo ka tirsan boqortooyada Malaa'igta; afarta dawladood ee kale, kuwaas oo haysta Guddoomiyaal Madaxbanaan, kama qaybgalaan doorashada. Heshiiska aan rasmiga aheyn waxaa si toos ah loogu beddelay sagaal,  waxaana qabtay by Muhammad V of Kelantan tan iyo bishii December 2016.  Doorka King wuxuu ahaa mid dardar badanaa tan iyo isbeddelkii dastuurka ee 1994, wasiir ku xigeenka iyo xubno ka tirsan aqalka sare.Gobol kasta wuxuu leeyahay Golaha Sharci-sameynta ee Golaha Wakiilada oo xubnihiisa laga soo doorto degaannada xubinta ka ah. Dawlad goboleedyada waxaa hogaaminaya wasiir ku-xigeen,  kuwaasoo ah xubno ka mid ah xubnaha golaha oo ka socda aqlabiyadda golaha. In kasta oo ka mid ah dawladaha leh hoggaamiye dhaxal galka ah, wasiirka ayaa caadi ahaan looga baahan yahay in uu noqdo Malay, oo uu u magacaabay taliyaha markii uu soo jeediyo ra'iisal wasaaraha.  Doorashooyinka Baarlamaanka waxaa la qabtaa ugu yaraan hal mar shantii sanaba mar, ugu dambeeyay ee ka dhacay May 2013.  Codbixiyeyaasha diiwaangashan ee da'doodu tahay 21 iyo wixii ka sarreeya ayaa u codeyn kara xubnaha Golaha Wakiillada iyo, inta badan dawlad-goboleedyada, oo ah gol-goboleedka sharci-dejinta ee dawladda. Codbixintu maaha mid khasab ah.  Marka laga reebo doorashooyinka gobolka ee Sarawak, doorashooyinka dawlad-goboleedka waxaa lagu qabtaa doorashooyinka federaalka.